Yini engaphinde ihlangane ngamawele amalangabi? - Mytika Speak
Ikhaya / Amalangabi Amabili Nothando Olungcwele / Yini engaphinde ihlangane ngamawele amalangabi?
Kwangathi 25, 2021
Amalangabi amabili bangafeza noma yini inhloso yabo ethile. Lokhu kuzokwembulwa kubo ngesikhathi esifanele. Kuhlukile kuwo wonke umuntu. Abanye abantu bamane nje abanamgomo ngezikhathi ezithile zokuphila. Kuvamile ukucabanga ukuthi wonke umuntu unenhloso kodwa lokhu akwenzeki ngaso sonke isikhathi. Kunabantu abalapha ngokukhethekile ukuzwa impilo futhi bakhule izifundo ekuphileni. Bakhetha ukuphila impilo futhi abazizwa benesifiso sokujaha umgomo.
Yamukela izenzo zethu,
Amathegiukuqonda ukukhula komuntu siqu izinkondlo ingokomoya Amalangabi Amabili
Ingabe amalangabi amawele njengamanje ahlangana kakhulu?
Ngingalithola kanjani iwele lami?
Ingabe amalangabi amawele ayaxhumana ngaphambi kokuhlangana?
Kungani umphefumulo owodwa ungakhetha ukuhlukana kabili?
UCharlie Young uthi:
Meyi 25, 2021 at 4: 11 pm
Meyi 25, 2021 at 4: 15 pm
Ngiyabonga uCharlie! ❤️
Meyi 25, 2021 at 5: 23 pm
Muhle kakhulu, futhi usho kahle 🖤🤗
Meyi 25, 2021 at 5: 31 pm
Ngiyabonga Ace, ngiyajabula ukuthi uyithandile! ❤️
Meyi 26, 2021 at 7: 39 am
Okuthunyelwe okuhle kakhulu !!
Meyi 26, 2021 at 9: 17 am
Ngiyabonga Kaushal! ❤️
Ingabe i-Extreme Ego idala ukungaboni ngaso linye?
Amandla aqinile angaba ngokweqile kanjani?